Aqida Ahle Sunnaut Waljamaat အာကီဒါအဟ်လေ့စွန္နတ်ဝလ်ဂျမာအတ်ဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်များ | Pure Sunni (Ya Robbae Salle Wasllim Ala Mohamadin)
← ကွရ်အာန်ထဲက သူတော်စင်လုက်မားန် သခင်ကြီး မိမိသားတော်အားဆုံးမခဲ့သည့် ရွှေစကားများ
ဂျဟန္နမ်တံခါးပိတ်စေမည့်စစ်မှန်သော တောင်ဗါအသ်တဂ်ဖါရ်ပြုလုပ်ခြင်း →
ကျွန်ုပ်တို့သည် မွတ်ဆလင်မိဘ များထံမှ မွေးဖွားသူများဖြစ်ရုံနှင့် မွတ်ဆလင် အမည်ထားရုံနှင့် မွတ်ဆလင်မဖြစ်နိုင်ပါ။ စစ်မှန်သော
မွတ်ဆလင် တစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ရေးအတွက်ကွရ်အန်နှင့်ဟာဒီးစ် လမ်းစဉ် အမိန့်၊ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းဖြစ်ရမည်။ အချို့သော သူတို့သည် တမန်တော် မိုဟာမ္မဒ် စွလ္လာလ္လာဟု အလိုက်ဟိစ္စလာမ် နောက်ပိုင်း၊အခြားတစ်ဦးဦး ကိုရစူလ် နဗီအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊အချို့သောသူ
တို့ သည်အလ္လာဟ်အရှင်၏ အမိန့်ညွှန်ကြားချက် ဖရဇ် ကိုငြင်းပယ်ခြင်း၊အချို့သောသူတို့သည် ကွရ်အန်၊ ဟာဒီးစ်နှင့်ပတ်သက်၍ဝေဖန်
ခြင်းများ ပြုလုပ်သူများလေ့ရှိသည်။ထိုကဲ့သို့သော သူများသည်စစ်မှန်သောမွတ်ဆလင် လုံ့ဝ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း သိရှိစေရန်တင်ပြပါသည်။
မွတ်ဆလင်တိုင်းသည်အစ္စလာမ်လမ်းစဉ်တွင်ဖေါ်ပြပါရှိသောယုံကြည်ချက်များ၊လမ်းညွှန်ချက် များကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ယုံကြည်စွာ
လက်ခံ ရမည် ဖြစ်သည်။အကယ်၍ အာကီ ဒါဟ် အီမာန်ယုံကြည်မှု မမှန်ပါက ထိုသူသည် စစ်မှန်သော မွတ်ဆလင်မဟုတ်ဘဲထာဝရ
ဆုံးရှုံး သော ကာဖိရ် မိစ္ဆာ အယူမှားသို့ရောက်ရှိပြီး ဂျာဟန္နာမ်ငရဲတွင် ထာဝရ ပြစ်ဒဏ်ကိုကျခံရမည်ဖြစ်သည်။
သို့ဖြစ်ရာ မှန်ကန်သောအယူဝါဒကို သိရှိရန်အလို့ငှာ အိန္ဒိယ ပညာရှင်များဖြစ်သော ဟဇရတ်မော်လနာ အာရှဲက်အိလာဟိ ဘူလန်ဒဲရေးသားသော ” အိစ္စလာမီအာကာအိဒ် “ကျမ်း ၊ အိန္ဒိယ်နိုင်ငံ မွဖ်တီချုပ်ဟဇရတ်မော်လာနာ ကိဖါယတွလ္လာ ရေးသားသော ” အိုစူလေ အိစ္စလာမ် “ကျမ်း နှင့် အခြားကျမ်းများကိုကိုးကား၍ အနှစ်ချုပ်ရေးသားဖေါ်ပြပါသည်။မွတ်ဆလင်ညီနောင်များ မှန်ကန်
သော လမ်းစဉ်ပေါ် တွင် ရပ်တည်နိုင်ရန် အပိုင်း ခွဲ၍ ကဏ္ဍ အလိုက်ရှင်းလင်းကာ ရေးသားတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။လမ်းမှန်သို့်
မယုံကြည် ငြင်းပယ်ပါကမွရ်တဒ်ကာဖိရ် ဖြစ်သွားမည်။မွတ်ဆလင်တို့သည်ကာဖိရ် များနှင့်လက်ထပ်ပေါင်းသင်း နေထိုင်ခွင့်
မသင့်ကြောင်း၊ မွတ်ဆလင်တိုင်းသည်အထက်ပါယုံကြည်ချက်များကိုတသဝေမတိမ်းယုံကြည်လက်ခံရမည်ဟု ကွရ်အန်ကျမ်းစာတွင်
Aqida-(၂) ရစူလ်နဗီတမန်တော် များဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်
Aqida-(၁၂) အိလ်မလ်ဂိုဗ် အကွယ်အသိပညာဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်
Aqida-(၁၅) လူတဦးသေခါနီး ဂျန္နတ်၊ဂျဟန္နမ်ပြသည့်ဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်
Aqida-(၁၆) သေဆုံးသူအပေါ်အီစွာလီစွဗ်ကုသိုလ်ကောင်းမှု ပြုလုပ်ခြင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်
Aqida-(၁၉) ဟရှရ်နေ့တမန်တော် မိုဟာမ္မဒ်ကယ်တင်မှုဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်
Aqida-(၂၀) ဂျန္နတ်၊ဂျဟန္နမ် ဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်ယုံကြည်ချက်
Aqida-(၂၁) ရှရိက် တုဖက်ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်
Aqida-(၂၃) ဂျန္နတီသုခဘုံသား၊ဂျဟန္နမ် ငရဲသားဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်
Aqida-(၂၄) ဂျန္နတီသုခဘုံသား၊ဂျဟန္နမ် ငရဲသားဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်
Aqida-(၂၅) အလ္လာအရှင်မြတ်ကို ဖူးမြင်ခြင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်
Aqida-(၂၆) ကောင်းသောသူနှင့်မကောင်းသောသူများ အပေါ်ထားရှိခြင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်
အပိုင်း( ၂ )
၂။…..ထိုအရှင်မြတ်၌ မည်သူ့ကိုမျှ မှီခိုအားထားခြင်းမရှိဟု ယုံကြည်ခြင်း။
၃။…..ထိုအရှင်မြတ်တွင် သားသမီး၊မိဘ၊ လုံ့ဝ မရှိ ဟု ယုင်္ကြည်ခြင်း။
၄။….ထို အရှင်မြတ်သည် တန်ခိုးအရှိဆုံး အမြဲထာဝရ တည်ရှိတော်မူသောအရှင်
၅။…..ထိုအရှင်မြတ်သည်အနိုင်းမဲ့ဖြစ်၍ အလွန်ထူးခြားသော အရှင်မြတ်သည်ဟုယုံကြည်ခြင်း။
၆။…..ထိုအရှင်မြတ်သည် အရာရာကို စွမ်းဆောင်နိုင်တော်မူ သည်ဟု ယုံကြည်ခြင်း။
၇။…..ထိုအရှင်မြတ်သည် မသိသောအရာဟူ၍ မရှိ၊ အကြွင်းမဲ့ သိတော်မူသည်ဟုယုံကြည်ခြင်း။
၈။…..ထိုအရှင်မြတ်ပြောဆိုတော်မူသည်။ သို့သော် လူသားကဲ့သို့လုံ့ဝ မဟုတ်ဟု ယုံကြည်ခြင်း။
၉။…..ထိုအရှင်မြတ်သည် မိမိအလိုအတိုင်းပြုလုပ်စီမံတော်မူသည်။မည်သူမျှတားဆီး၍ မရနိုင်ဟုယုံကြည်ခြင်း (Supper Power)။
၁၀။…..ထိုအရှင်မြတ်သည် အပြစ်ကင်းစင်၍ တန်ခိုးအရှိဆုံး၊အစွမ်းထက်ဆုံးဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ခြင်း။
၁၁။….သက်ရှိသက်မဲ့ စင်္ကြာ အားလုံးကိုထိုအလ္လာအရှင်မြတ်၏တန်ခိုးတော်နှင့်ဖန်ဆင်းသည်ကို ယုံလက်ခံခြင်း။
၁၂။….သက်ရှိသတ္တဝါ တို့၏ သေခြင်း၊ရှင်ခြင်း ဟယာတ် သက်တမ်းကို ထိုအရှင်မြတ်သတ်မှတ်
၁၃။….သက်ရှိသက်မဲ့ စင်္ကြာ အားလုံးကိုအလ္လာအရှင်မြတ်၏တန်ခိုးတော် နှင့်ဖန်ဆင်းသည်
၁၄။….ထိုအရှင်မြတ်၏ ဂုဏ်တော် ( ၉၉ )ပါး ကို သံသယကင်းရှင်းစွာလက်ခံယုံကြည်ခြင်း။
၁၅။….သက်ရှိသက်သတ္တဝါတို့၏ ရိုဇီရိက္ခာအားလုံး ကိုထိုအရှင်မြတ် ချီးမြင့်သည်ဟု ယုံကြည်ခြင်း။
၁၆။….လူတို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းခြင်း၊မြင့်မားခြင်း အားလုံး အလ္လာအရှင်မြတ်၏
၁၇။….လူသားတို့သည်မိမိတို့၏ အပြစ်ဂိုနားဟ် အတွက်ဝန်ချတောင်းပန်( တောဝ်ဘာ )
၁၈။….လူသားတို့တောင်းဆိုသော ဒူအာ ကိုထိုအရှင်မြတ်က လက်ခံသည်ဟုယုံကြည်ခြင်း။
၁၉။….အလ္လာအမြတ် ဖန်ဆင်းသမျှအားလုံး အမှားအယွင်း လုံ့ဝမရှိအပြစ်ကင်းစင်ဟု ယုံကြည်လက်ခံခြင်း။
၂၀။….ဖြစ်ပေါ်သမျှ အရာရာ အားလုံးသည် ထိုအရှင်မြတ်၏ အမိန့် အတိုင်းသာဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်လက်ခံခြင်း။
၂၁။….ထိုအရှင်မြတ်၏ အမိန့်မရှိဘဲ မြူမှုန်ပင် မရွေ့လျားနိုင်ဟု ယုံကြည်လက်ခံခြင်း။
၂၂။….ထိုအရှင်မြတ်၏ ရဟာမတ်(သနားကြင်နာမှု) အပေါ်ယုံကြည်ခြင်း(Hopeless)မဖြစ်ခြင်း။
၂၃။….ထိုအရှင်မြတ်ဖန်ဆင်းသမျှ အရာအားလုံးကို ထိုအရှင်း၏ အာဏာစက်၊အစောင့်
၂၄။….အလ္လာအရှင်မြတ်သည် အနိုင်းမဲ့ဖြစ်၍ အဖန်ဆင်းခံကဲ့သိုအင်္ဂါရပ်များ( ကိုယ်၊လက်…စသည်)တို့မှ လုံ့ဝကင်းရှင်းသည်ဟုယုံကြည်ခြင်း။
၂၅။….သက်ရှိ၊သက်မဲ့ အားလုံး၏ ကံကြမ္မာ ကိုအလ္လာအရှင်မြတ်ကက ကြိုတင်စီမံထားသည်ဟု
၂၇။….ဟေဒါယတ်လမ်းမှန်တရားကို ထိုအရှင်မြတ်က ချီးမြင့်မှရရှိသည်ဟု ယုံကြည်ခြင်း။
၂၈။….လူသားတို့စွမ်းဆောင်နိုင်သော အမိန့် ကိုသာ ချမှတ်တော်မူ၍၊မစွမ်းဆောင်နိုင်
၂၉။….ထိုအရှင်မြတ်သည် တန်ခိုးအရှိဆုံးဖြစ်၍ အားလုံးသူအပေါ်စိုးမိုးတော်သော
၃၀။….ထိုအရှင်မြတ်သည် အိပ်စက်ခြင်း၊မေ့လျော်ခြင်း၊မုသပြောခြင်း …လုံ့ဝမရှိဟု ယုံကြည်ခြင်း။
၃၁။….အလ္လာအရှင်မြတ်၏ဂုဏ်တော်တွင်( ကလာမုန်၊ဘစီရုန်၊စမီအုန်) ပြောဆိုသည်၊မြင်သည်၊
၃၂။….ထိုအရှင်မြတ်တွင် မသိ၊မမြင်သောအရာဟူ၍မရှိ၊ လူ့စိတ်နှလုံးသားအတွင်းရှိ လျှို့ဝှက်ချက်များ ကိုလည်းသိရှိသည်ဟု ယုံကြည်ခြင်း။
၃၄။….ထိုအရှင်မြတ်အား လူသားတို့သည် လောကီမျက်စိအာရုံ ဖြင့်မြင်နိုင်စွမ်းမရှိဟု ယုံကြည်ခြင်း ။
၃၅။….ထိုအရှင်မြတ်သည်လူသားတို့၏လိုအင်ဆန္ဒကိုဖြည့်စွမ်းနိုင်းသောတန်ခိုးအရှိဆုံးဖြစ်၍ ထိုအရှင်မြတ်မှတပါး အခြားကိုးကွယ်ထိုက်သူမရှိဟု ယုံကြည်ခြင်း။
အလ္လာအရှင်မြတ်သည် ကမ္ဘာလူသားတို့အား ဟေဒါယတ် တရားလမ်းမှန်ညွှန်ကြားရန်မြောက်
များစွာသော ရစူလ်တမန်တော်များ၊နဗီတမန်တော်များစေလွှတ်ခဲ့ပါသည်။ပထမဆုံး ပွင့်ခဲ့သောတမန်
တော်မှာ အာဒမ်(အလိုက်ဟိစ္စလာမ်)ဖြစ် ၍နောက်ဆုံးပွင့်သော တမန်တော်ချုပ်မှာ မိုဟာမ္မဒ်(စွလ္လာလ္လာ
ဟုအလိုက်ဟစ္စလာမ်) ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်ရှိသော နဗီအပေါင်း အပေါင်းတို့မှာ ဖေါ်ပြပါ တမန်တော် ( ၂ ) ပါးကြားတွင် ပွင့်တော်မူ ခဲ့သောတမန်တော် များဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့အနက် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသော တမန်တော် အချို့၏အမည်နာမ တော်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
(က)။…နဗီတမန်တော်ပေါင်း၏ အရေအတွက်အလ္လာအရှင်မြတ်မှတပါးမည်သူမျှမသိနိုင်။ထိုပွင့်လေသမျှသောနဗီ အားလုံးကိုသိသည်ဖြစ်စေ၊မသိသည်ဖြစ်စေ ထိုတမန်တော် အားလုံးအားယုံကြည်လက်ခံခြင်း။
(ခ)။…တမန်တော် မိုဟမ္မဒ်သည် နောက်ဆုံး တမန်တော် ဖြစ်တော်မူ ၍၎င်းနောက်ပိုင်းနောက်ထပ် နဗီအသစ်ပွင့်ရန်မရှိ ဟူယုံကြည်ခြင်း။
(ဂ)…ပွင့်လေသမျှသော တမန်တော်များထံသို့ ဂျိဘရာအီးလ် (အလိုက်ဟိစ္စလာမ် ) က အလ္လာအရှင်မြတ် ထံမှ ဗျာဒိတ်တော် (ဝဟီ) ယူဆောင် လာခဲ့သည်ကိုယုံကြည်ခြင်း။
(ဃ)…ရစူလ်၊နဗီ တမန်တော်မုအ်ဂျေဇအ် တန်ခိုးများအလ္လာအရှင်မြတ်က ပေးအပ်ထားသည်ကိုယုံကြည်ခြင်း
(င)…နဗီ၊ရစူလ် တမန်တော်အားလုံးသည် တပြေးညီမဟုတ်ဘဲ အဆင့်အတန်းအနိမ်းအမြင့်ရှိသည်ကိုသည်ကိုယုံကြည်ခြင်း။
(စ)…နဗီတမန်တော်အားလုံးတွင် တမန်တော် မိုဟမ္မဒ် သခင်(စွလ္လာလ္လာဟု အလိုက်ဟိစ္စလာမ်)
(ဇ)…နဗီ၊ရစူလ် တမန်တော်များသည် အလ္လာအရှင်မြတ်၏အနှစ်သက်ဆုံး၊အကြည်တော်များ
(ဈ)…အာလီမွလ်ဂိုဗ် (အကွယ်ရှိ အသိပညာ) အလ္လာ အရှင်မြတ်မှလွှဲ၍ မည်သူမျှမသိနိုင်။သို့သော်
(ည)…အလ္လာအရှင်မြတ်ထံမှ နဗ၊ီရစူ တမန်တော်များထံသို့ ကျမ်းများချ ပေးခဲ့သည်။၎င်းတို့
(၁)…တမန်တော်–မူဆာ-(အလိုက်ဟိစ္စလာမ်) ထံ တောဝ်ရတ်ကျမ်း
(၃)…တမန်တော်–အီစာ-(အလိုက်ဟိစ္စလာမ်) ထံ အင်ဂျင်လ်ကျမ်း
(၄)…တမန်တော်–မိုဟမ္မဒ်–(စွလ္လာလ္လာဟုအလိုက်ဟိစ္စလာ်) ထံ ကွရ်အန်ကျမ်း
ဉပမာ။ ။အင်ဂျင်လ်ကျမ်းသည်တမန်တော်–အီစာ-(အလိုက်ဟိစ္စလာမ်) ထံ ချခဲ့သောကျမ်းကို(Bible)
(ဋ)…နဗီတမန်တော် မိုဟာမ္မဒ် သခင်(စွလ္လာလ္လဟုအလိုက်ဟိစ္စလာမ်) သာမက အခြားနဗီတမန်
(Ref:၁။… Shakul Hadees Mohades Dehlawi သခင်၏ မဒါရေဂျွန် နဗူဝပ်ကျမ်း)
၂။…ဖွတ္တဟွလ်ဘာရီကျမ်း(ဘူခါရီအကျယ်ပြန်)အတွဲ(၇)၊စာမျက်နှာ (၂၂) အီဂျစ်ရိုက်
၃။…ဘူခါရီအကျယ်ပြန် အွမ္မဒတွလ်ကာရီ အတွဲ(၇)၊စာမျက်နှာ(၆၀၀)နှင့်အခြားကျမ်းများ
မှတ်ချက်။ ၁။…တမန်တော်မြတ်များထာဝရရှင်နေခြင်း အခန်းကဏ္ဍကို သီးခြားခေါင်းစဉ်တင်ပြသွားပါမည်။
၂။…မိမိအသိပညာဖြင့် ညာဏ်မီသည်ဖြစ်စေ၊မမီသည်ဖြစ် စောဒကမတက်ဘဲယုံကြည်လက်ခံရန် ဖြစ်သည်။
(က)…မလာအိကာဖိရိရ်ှတာများသည် ယောင်္ကျားလည်း မဟုတ်၊မိန်းမလည်း မဟုတ်ဟုယုံကြည်ခြင်း။
(ခ)…၎င်းတို့တွင်သားသမီး လည်းမွေးဖွားခြင်းမရှိခြင်း၊ဇနီးမယား လည်းမရှိဟုယုံကြည်ခြင်း။
(ဂ)… လူသားတွင်ရှိသော ကာမ၊တဏှာ ရာဂ ကိလေသ တို့မှ လုံ့ဝကင်းရှင်းသည်ဟု ယုံကြည်ခြင်း။
(ဃ)…လူးသားတို့ကဲ့သို့ အပြစ် ဒုစရိုက် ကျူးလွန်မှု မရှိခြင်း။
(င)…အလ္လာအရှင်မြတ် အမိန့်ကို တသဝေ မတိမ်း နာခံလိုက်နာသူများဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ခြင်း။
(စ)…အလ္လာအရှင်မြတ်သည် ကမ္ဘာလောက၏ များစွာသော တာဝန်များ၊စီမံခန့်ခွဲမှုများကိုကောင်းကင်မလာအိကာ တမန်များအားလွှဲအပ်သည်ဟု ယုံကြည်ခြင်း။
(ဆ)…ကောင်းကင်တမန်များ၏ အရေအတွက်ကို အလ္လာအရှင်မြတ်မှတပါးမည်သူမျှမသိဟုယုံကြည်ခြင်း။
(ဇ)…မလာအိကာတမန်များအနက် (၄ )ပါးသော မလာအိကာသည် မြင့်မြတ်၊ထင်ရှားပါသည်။၎င်းတို့မှာ—
၁။—ဂျိဗ်ရာအိလ် အလိုက်ဟိစ္စလာမ်သည် နဗီ တမန်တော်များထံသို့ အလ္လာအရှင်မြတ်၏ အမိန့်တော် များကို ပို့ဆောင်ခြင်း တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့၏။
၂။—အိဇ်ရာအီလ် အလိုက်ဟိစ္စလာမ် သည် သတ္တဝါများကို အသက်ဇီဝိန်ကို နုတ်ယူသောတာဝန်ကိုထမ်း
၃။—မီကာအိလ် အလိုက်ဟိစ္စလာမ် သည် မိုးရွာခြင်း၊သတ္တဝါအပေါင်း၏ စားနပ်ရိက္ခာပို့ဆောင်ခြင်းတာဝန်များ ကိုထမ်းဆောင်၏။
၄။—အိစ္စရာဖိလ် အလိုက်ဟိစ္စလာမ် သည်ကိယာမတ်ကမ္ဘာပျက်မည့်နေ့ တွင်ခရာပလွေ မှုတ်သော တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်၏။
(ဈ)။…အလ္လာအရှင်မြတ်သည် အဖန်ဆင်းခံ (မခလုက်) အချို့ကိုနုရ်ရောင်ခြည်တော်ဖြင့်၎င်း၊အချို့မီး
(ည)။…ဖရိရ်ှတာ(တမန်များ)ကို နူးရ်ရောင်ခြည်တော်ဖြင့် ဖန်ဆင်း၏။၎င်းတို့ကို ကျွန်တော်မျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်ခြင်း။
(ဋ)။…ထိုဖိရိရ်ှတာ များသည်အလ္လာ အမိန့်ကို အမြဲနာခံလေ့ရှိသည်။ဆန့်ကျင်၍ မည်သည့်အလုပ်ကိုမျှ
(ဌ)။…ဖိရိရ်ှတာများစွာ အနက်ဟဇရတ်ဂျီဘရာအီလ်(အလိုက်ဟိစ္စလာမ်) သည်အလွန်ကျော်ကြား သော
(ဍ)…ထိုတမန်ကြီသည် ပွင့်လာမျှ တမန်တော်များထံ ဝဟီ(ဗျာဒိတ်) ယူတောင်ခဲ့သည်ကို ယုံကြည်ခြင်း။
( ဎ)…အလ္လာအရှင်မြတ်သည် ကွရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ် ကို၎င်းမှတဆင့် တမန်တော်မိုဟာမ္မဒ် ထံပို့ချသည်ကို ယုံကြည်ခြင်း။
(ဏ)။…ဟဇရတ်ဂျီဘရာအီလ်(အလိုက်ဟိစ္စလာမ်) ကို ကျမ်းမြတ်ကွရ်အန်တွင် (ရုဟွလ်အာမိန်)ဟု ကင်းပွန်းတပ် ခေါ်ဝေးထားသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
Islami Aqida အပိုင်း ( ၅ )
(က)—-အလ္လာအရှင်မြတ်သည် ဂျင်(နတ်၊ဗြဟ္မာ၊နာနာဘဝ၊တစ္ဆေ၊သရဲ၊မကောင်းဆိုးဝါးကောင် ….
…စသည်မျာ) ၎င်း ဂျင်များကိုမီးဖြင့်ဖန်ဆင်တော်မူသည်။
(ခ)—-၎င်းတို့ကို ကျွန်ပ်တို့မျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်ပေ။၎င်း ဂျင်တွင်လည်း မုအ်မင်၊မွတ်ဆလင် ဂျင်များနှင့်
(ဂ)—-လူသားတို့ကဲ့သို့ အိမ်ထောင်ပြုခြင်း၊သားသမီးထွန်ကား သည်။၎င်းတို့တွင် အထင်ရှားဆုံး၊
(က)—အစ္စလာမ်ဘာသာတရားတော်ကို ကိုင်းရှိင်းပြီး အပြစ်ဂိုနားဟ်များကိုရှောင်ကြဉ်၏။
(ခ)—လောကီရေးများအား စိတ်မဝင်စားဘဲ အလ္လာအရှင်မြတ်နှင့်ရစူလ်နဗီ ၏အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များကို အမြဲလေးစာလိုက်နာကျင့်သုံး၏။
(ဂ)—ဤသို့သောသူကို ဝလီသူတော်စင်ဟု ခေါ်သည်။
(ဃ)—တစ်ခါတစ်ရံ ထိုပုဂ္ဂိုလ်များသည် သာမန်လူသားတို့မစွမ်းဆောင်နိုင် ကေရာမတ်(တန်ခိုး) အဖြစ်ဆန်းများ ပေါ်ပေါက်တတ်သည်။
(င)—၎င်းကို ကေရာမတ်ဟုခေါ် ယုံကြည်ရ၏။
(စ)—ဝလီသူတော်စင်များသည်မည်မျှပင် အဆင့်အတန်းကြီးမားစေကာမူ နဗီ အဆင့်သို့မရောက်နိုင်ပေ။
(ဆ)—ဝလီသူတော်များသည်မည်မျှပင် အဆင့်အတန်းမြင့်မားစေကာမူ သတိဝိရိယနှင့်ရှိနေသမျှရှရီအတ်
(ည)—ရှရီအတ်တရာတော်ကို ဆန့်ကျင် လျှောက်လှမ်းသောသူသည် ဝလီသူတော်စင်မဖြစ်နိုင်ချေ။
(ဋ)—ထိုသူတော်စင်တို့သည် ဆန်းသစ်သော အံ့ဖွယ်ရာများပေါ်ပေါက်ခဲ့သော်လည်း ထိုလုပ်ရပ်သည် မျက်လှည့်၊မှော်၊အောက်လမ်းပညာတစ်ခုခုဖြစ်၍ ထိုသူ့အပေါ်ယုံကြည်ခြင်း၊တပည့်ခံယူခြင်းသည်
(က)—-အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့်တမန်တော်မြတ်၏ သည်သာသနာရေးကိစ္စများနှင့် ပါတ်သက်၍ ကျမ်းမြတ်ကွရ်အန်နှင့် ဟာဒီစ်တော်များတွင်ရှင်းလင်းတင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
(ခ)—-ထိုကျမ်းတော်များတွင်မရှိသော အလုပ်များကို အသစ်တီထွင်၍ ကျင့်သုံးခွင့်မပိုင်ပေ။
(ဂ)—-ဤအသစ် တီထွင်ခြင်းကို ဗစ်ဒ်အတ်ဟုခေါ်လေသည်။
(င)—-အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့်တမန်တော်မြတ်၏ အမိန့် ညွှန်ကြားချက်များကို တိကျစွာ ယုံကြည်ရမည်။
(စ)—-ထိုအမိန်ညွှန်ကြားချက်များ အပေါ် သံသယဝင်ခြင်း၊ဝေဖန်ခြင်း၊အပြစ်ရှာခြင်းနှင့် နှောက်ပြောင်ခြင်းပြုလျှင်အီမာန်ပျက်သည် -ဟုယုံကြည်ရမည်။
(က)—-စွဟာဘီဆိုရာတွင်တမန်တော်မြတ်အားအီမာန်ဖြင့်တွေ့မြင်၍ အီမာန်နှင့်တကွကွယ်လွန်သွားသောသူကို စွာဟာဘီ(သာဝက)ခေါ်ကြသည်။
(ခ)—-ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ အဆင့်အတန်းသည် အလွန်မြင့်မားသည်။
(ဂ)—-၎င်းတို့ကို ချစ်ခင်လေးစားကြည်ညိုခြင်းနှင့်ကောင်းမြတ်သော ထင်မြင်မှုများထားရှိရန်
(၁)—-ဟဇရတ်အဘူဘက္ကရ်စိဒ္ဒိက် သခင်ရဇီယလ္လာဟုအန္နူဟူသည် ပထမဆုံးခလီဖါ(ပထမဆုံး သမ္မတ)ဖြစ်ပြီးအွမ္မတ်များအားလုံးတွင်အမွန်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။
(၂)—-ဟဇရတ် အူမွရ်သခင်ရဇီယလ္လာဟုအန္နူဟူသည် ဒုတိယမြောက် ခလီဖါ(ဒုတိယမြောက် သမ္မတ)ဖြစ်ပြီးအွမ္မတ်များအားလုံးတွင်ဒုတိယအမွန်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။
(၄)—-ဟဇရတ် အအွစ်မားန် သခင်ရဇီယလ္လာဟုအန္နူဟူသည် တတိယမြောက် ခလီဖါ(တတိယမြောက် သမ္မတ)ဖြစ်ပြီးအွမ္မတ်များအားလုံးတွင်တတိယ အမွန်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။
(၂)—-ဟဇရတ်အာလီ သခင်ရဇီယလ္လာဟုအန္နူဟူသည် စတုတ္ထမြောက် ခလီဖါ(စတုတ္ထ သမ္မတ)ဖြစ်ပြီးအွမ္မတ်များအားလုံးတွင်စတုတ္ထ အမွန်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ရာ၏။
(က)—-ကျွနုပ်တို့မြတ်နဗီတမန်မိုဟာမ္မဒ် သခင်စွလ္လာလ္လာဟုအလိုက်ဟိစ္စလာမ် ၏ဇနီးကြင်ယာတော်များနှင့်သား၊သမီးတို့အားအစဉ်အလေးစားကြည်ညိုကြရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သည်။
(ခ)—-ဇနီးကြင်ယာတော်များတွင် ခတီဂျာသခင်မနှင့်အာအေရှာ သခင်မသည်အဆင့်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။
(ဂ)—-သားသမီးများတွင် ဖါတေမ သခင်မသည် အဆင့်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည် ဟု ယုံကြည်ရာ၏။
(က)—-အပြစ်ဂိုနားဟ် တခုခု ကိုလုပ်ပိုင်သည်ဟုယူဆလျှင် အီမာန်ပျက်၏။
(ခ)—-အပြစ်ဂိုနားမည်မျှပင်သေးငယ်စေကာမူ မကောင်းမှုဟုယူဆနေသမျှ အီမားန်မပျက်ပေ။
(ဂ)—-သို့သော်အပြစ်မှုဂိုနားကျူးလွန်ခြင်းဖြင့် အီမာန်ကို ညှိုးနွမ်း၍ အားနည်းစေသည်။
Aqida ယုံကြည်ချက်(၁၀) အလ္လာရဟာမတ်(မျော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့ခြင်း) ဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်များ
(ခ)—-အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် ထံမှ ရဟာမတ် မျော်လင့်ချက် ကင်းမဲ့ခြင်း( Hopeless from Allah’s kindness ) သည် ကွဖ်ဖရ်(သွေဖီငြင်းပယ်ခြင်း) ဖြစ်သည်။
(က)—-ဗေဒင်ဆရာ၊လက္ခဏာဆရာ၊နက္ခတ်ဗေဒ ပညာရှင်များထံ ဗေဒင်မေးခြင်း၊ဗေဒင်ဟောသည်
(က)—-အိလ်မလ်ဂိုက် အကွယ်မှာရှိသော အကြောင်းအရာများကို အလ္လာအရှင်မြတ်မှ တပါးအခြားမည်သူ
(က)—-လူတစ်တစ်ယောက် အား အမည်တပ်၍ ကာဖိရ်ဟူ၍လည်ကောင်း၊ အလ္လာဟ်၏လာအအ်နတ်ကျရောက်ပါစေဟူ၍လည်းကောင်း လုံ့ဝပြောဆို ပိုင်ခွင့်မရှိပေ။
(ခ)—- သို့သော် ဇာလင်မ် မတရားညှင်းပန်းနှိပ်စက်သူတို့အပေါ်အလ္လာ၏လာအအ်နတ် ကျရောက်
(၂)…တန်တော်–ဒါဝူးဒ်-(အလိုက်ဟိစ္စလာမ်) ထံ ဇဘူရ်ကျမ်း
(၄)…တမန်တော်–မိုဟမ္မဒ်–(စွလ္လာလ္လာဟုအလိုက်ဟိစ္စလာ်) ထံ ကွရ်အန်ကျမ်း—စသည်တီု့ဖြစ်သည်။
ဉပမာ။ ။အင်ဂျင်လ်ကျမ်းကို (Bible)ဟု၍အမည်ပြောင်းပြီးမိမိ် အလိုကျအလျှော့၊အတိုးများပြုလုပ်ကာ ဓမ္မာဟောင်း၊ဓမ္မာသစ် သို့ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်။
၁။—-လူတစ်ဦးသေဆုံးချိန်ရောက်သောအခါ(စခရာတ်)သေမျောမျောသောအခါ ထိုသူအား၊ သေဆုံးလျှင် သူသွားမည့်နေရာဂျန္နတ်လား(သို့မဟုတ်)ဂျဟန္နမ်လား ဆိုတာကို၎င်းအားပြသည်။
၂။—-အီမာန်ရှင်ဖြစ်ပါက ဂျန္နတ်သွားမည်ဖြစ်၍သူပျော်သွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ငရဲသွားမည်သူဖြစ်ပါက အထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားမည်။
၁။—- လူတို့ သေဆုံးလျှင်ဘဝအမျိုးမျိုးကူးပြောင်း သည်ဆိုသောဝါဒမှာလုံ့ဝမှန်ကန်မှုမရှိပေ။
Aqida -(၁၈) ကေယာမတ်ကမ္ဘာပျက်မည့်ဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်များ
၃။—-မျက်စိတစ်လုံးတည်းရှိသော ” ဒဂ်ျဂျလ် “(ဓမ္မတရာယ်)ပေါ်ထွက်လာမည်။တစ်ကမ္ဘာ္ဘလုံးအားမွှေနှောက်ဖျကိစီးမည်။
၃။—-ဟဇရတ်အီစာ အလိုက်ဟိစ္စလာမ် ကောင်းကင်မှ ဆင်းသက်လာမည်။
၄။—-ဒဂ်ျဂျလ်ကို ဟဇရတ်အီစာအလိုက်ဟိစ္စလာမ်က သတ်ဖြတ်မည်။
၅။—-ယအ်ဂျုဂ်ျ ၊မအ်ဂျုဂ်ျ လူမျိုးပေါ်ထွက်လာပြီတစ်ကမ္ဘာလုံး ပျံ့နှံ့၍ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ပြုလုပ်မည်။
၇။—-အလွန်ထူးဆန်း အံ့ဖွယ်ရာကောင်းသော သတ္တဝါကြီးတစ်ကောင် မြေကြီးထဲမှပေါ်ထွက်လာ၍လူတို့နှင့်စကားပြောမည်။
အခြားလက္ခဏာများလည်းရှိပါသေးသည်- —– (ရှာဖွေတင်ပြပါမည်။)
၂။—ထိုအခါ အလ္လာအရှင်မြတ်၏အမိန်ဖြင့် အိစ္စရာဖိလ် ကောင်းကင်တမန်ကြီးက စူရ်- တံပိုးခရာကြီးကိုမှုတ်တော်မူမည်။
၃။—ထို စူရ်ခရာ ကြီးအသံကြောင်း အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သွားလိမ္မည်။
(က)– မိုးကောင်းကင် ပြိုကွဲသွားမည်၊ကြယ်တာရာများပျောက်ကွယ်ပျောက်သွားလိမ္မည်။
၁။—အလ္လာအရှင်မြတ်သည်အလိုရှိတော်မူသော အခါ ဒုတိယအကြိမ် စူရ်တံပိုးခရာကိုမှုတ်တော်မူမည်။
၂။—၎င်းစူရ်ခရာ အသံကြောင်း တလောက လုံးပြန်လည်ရှင်ပြန်ထလာမည်ဖြစ်သည်။
၅။—ထိုနေ့၏ဒုက္ခကြောင်း လူတို့သည်စိုးရိမ်၍ အထိတ်တလန့်ဖြစ်ကြလိမ္မည်။
၆။—လူတို့သည် သူတို့၏နဗီတမန်တော်များထံ အသနားခံလျှောက်လဲပေးရန်သွားရောက်မည်။
၇။—နောက်ဆုံး နဗီ တမန်တော်မိုဟာမ္မဒ် (စွလ္လာလ္လဟုအလိုက်ဟိစ္စလာမ်)က အလ္လာထံအသနားခံ လျှောက်လဲ၍ချွတ်ကယ်မည်။
၉။—မိမိ၏ ကောင်းမှု၊မကောင်းမှု (မိဇာန်)ချိန်ခွင်တွင် ချိန်တွယ်ခြင်းပြူမည်။
၁၁။—ကောင်းမြတ်သောသူများ၏အမလ် စာရင်မင်္ကျာဖက်ပေးအပ်ခံရပြီး၊သည် ဂျန္နတ်သို့သွားခွင့်ရမည်။
၁၂။—ကျွန်ုပ်တို့မြတ်နဗီ တမန်တော်မိုဟာမ္မဒ်(စွလ္လာလ္လာဟုအလိုက်ဟိစ္စလာမ်) မိမိအွမ်သားမျာကို ကောင်ဝ် စောရ်တိုက်ကျွေးလိမ္မည်။(ထိုရေသည်နို့ထက်ဖြူ၍ပျားရည်ထက်ချိုမည်။)
၁၄။—ကောင်းသောသူတို့သသည် စေရာတ် တံတားပေါ်မှ လျှင်မြန်စွာဖြတ်ကျော်နိုင်၍ငရဲသားတို့သည် ဂျန္နတ်သို့သွားဝင်သွားလိမ္မည်။
၁၅။—-မကောင်းမှုပြုလုပ်သော ကာဖရ်၊လူဆိုးလ၊လူမိုက် ဒုစရိုက် သမားများသည် စေရာတ်တံတားပေါ်မှချော်လိမ့်ကျ၍ဂျန္နမ်ငရဲသို့ သွားကြမည်။
(ဂ)—-အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကို ဂျန္နတ်သားတိုင်းမြင်တွေ့ကြမည်ဖြစ် ခြင်း၊
(ဃ)—၎င်းတွင် ပူဆွေးမှု၊ဆင်းရဲမှုမောပန်းမှု၊စိုးရိမ်ကြောင်းကြားမှု မရှိခြင်း၊
(ဆ)—၎င်းတွင် မည်သည့်အခါမျှ မသေရဘဲထာဝရရှင်သန်နေရမည်ဖြစ်ခြင်း— စသည်တို့ခံစားရမည်ဖြစ်ပေသည်။
(ခ)—-မျိုးစုံသော အဇာဘ်များ ပေးခံရမည်ဖြစ်ခြင်း၊
(ဂ)—-မြူမှုန်ခန့်လောက်မျှ အီမာန်ရှိမည်ဆိုပါကလည်းနောက်ဆုံးပြစ်ဒဏ်ကျခံရပြီး နောက်ဆုံးလွှတ်ငြိမ်
(ဃ)—အီမာန်လုံ့ဝမရှိသော ကာဖိရ်၊မူရ်ှရိက်တို့ ဂျန္နမ်ငရဲ`၌ အမြဲထာဝရအပြစ်ပေးခံနေရမည်ဖြစ်သည်။
(င)—-၎င်းတွင်ငရဲသားတို့အတွက် သေခြင်းတရား( Death) လုံ့ဝ မရှိ၊ထာဝရ ဂျန္နမ်မှာသာအဆုံးမရှိဘဲနေကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Aqida-(၂၃) ရှရိက် တုဖက်ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်များ
၁။—-အလ္လာအရှင်မြတ်သည် ရှရိက်တုဖက်ကိုးကွယ်ခြင်းကာဖိရ် သွေဖီဆန့်ကျင်ခြင်သူတို့အား လုံ့ဝ လွှတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးမည်မဟုတ်။
၂။—-ထိုဂိုနားဟ်မှအပ အခြားသောဂိုနားဟ်များကို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ကရုဏာတော်ဖြင့် ခွင့်လွတ်တော်မူမည်ဖြစ်သည်။
This entry was posted in Untags and tagged aqida. Bookmark the permalink.